ထူးခွား တဲ့ လာနီညာ (အအေးလှိုငျး) ဖွဈစဥျတှေ နဲ့ ကွုံတှရေ့မယျ့ အခွအေနေ (အမြားသိအောငျ ရှယျထားပေးပါအုံး ….) – Let Pan Daily
ထူးခွား တဲ့ လာနီညာ (အအေးလှိုငျး) ဖွဈစဥျတှေ နဲ့ ကွုံတှရေ့မယျ့ အခွအေနေ (အမြားသိအောငျ ရှယျထားပေးပါအုံး ….)
Let Pan | December 23, 2020 | Local News | No Comments
ဒီဇငျဘာ ၂၂ ရကျမှ ၂၉ ရကျအထိ တပတျအတှငျး မိုးလဝေသအခွအေနေ(22/12/2020)
ဒီရကျသတ်တပါတျကတော့ အားပြော့တဲ့ လပှေလှေိုငျးလေး တခု အရှမှေ့ အနောကျဘကျကို ဖွတျစရာရှိတာက လှဲလို့ ပွငျးထနျထူးခွားမိုးလဝေသအခွအေနေ သိပျမရှိပါ။
ထူးခွားနတောက ယခုနှဈကွုံတှရေတဲ့ လာနီညာဖွဈစဥျ (ပစိဖိတျသမုဒ်ဒရာ အလယျပိုငျး ပငျလယျရအေပူခြိနျ လြော့ကဖြေါကျပွနျမှု) တနညျးအားဖွငျ့ အေးသော အစှနျးရောကျ ရာသီဖေါကျပွနျမှုဟာ ယခငျက ဖွဈဘူးသော လာနီညာဖွဈစဥျမြားနဲ့ ကှဲပွားစှာ ဖွဈနခွေငျးပါ။
ဒါကတော့ လပှေလှေိုငျးတှေ ဖွဈပျေါမှု အရအေတှကျ ပိုလာခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီအတှကျ မွနျမာအပါအဝငျ အာရှတိုကျမှာ ကောငျးကြိုးဆိုးပွဈတှေ တိုးလာစပေါတယျ။
အခုတပါတျက ဖွဈလာမယျ့ လပှေလှေိုငျး သိပျမထငျရှားတဲ့ အပွငျ အီကှတောအနီး (မွောကျလတ်တီကြု့ 5-10 ဒီဂရီအတှငျး) လောကျသာ ဖွတျသှားနိုငျလို့ မွနျမာနိုငျအပျေါ သိပျမသကျရောကျနိုငျပါ။ သူဖွတျသနျ့းရကျ ဒီဇငျဘာ ၂၅ ရကျမှ ၂၇ ရကျအတှငျး မှနျပွညျနယျနဲ့ တနင်ျသာရီတိုငျးတှေ ကှကျကြားမိုးအနညျးငယျမှ အသငျ့အတငျ့ရှာနိုငျပါတယျ။
ကနျြဒသေတှမှော ဒီတပါတျအတှငျး မိုးကငျးပွီး ညအပူခြိနျသာ ဆကျလကျလြော့ကြ အေးနမှော ဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကခငျြစဈကိုငျးအထကျ ခငျြးပွညျနယျ ရှမျးမွောကျနဲ့ ကယားပွညျတှကေ ဆကျလကျအေးနဆေဲ ဖွဈနပေါမယျ။ ပဲခူး မကှေး ရှမျးတောငျ ရခိုငျရိုးမ တှမှော မွူထူဆိုငျးနိုငျပါတယျ။ နောကျတပါတျ မှာ ထပျမံတငျပွပါမယျ။
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ၂၉ ရက်အထိ တပတ်အတွင်း မိုးလေဝသအခြေအနေ(22/12/2020)
ဒီရက်သတ္တပါတ်ကတော့ အားပျော့တဲ့ လေပွေလှိုင်းလေး တခု အရှေ့မှ အနောက်ဘက်ကို ဖြတ်စရာရှိတာက လွဲလို့ ပြင်းထန်ထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေ သိပ်မရှိပါ။
ထူးခြားနေတာက ယခုနှစ်ကြုံတွေရတဲ့ လာနီညာဖြစ်စဉ် (ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အလယ်ပိုင်း ပင်လယ်ရေအပူချိန် လျော့ကျဖေါက်ပြန်မှု) တနည်းအားဖြင့် အေးသော အစွန်းရောက် ရာသီဖေါက်ပြန်မှုဟာ ယခင်က ဖြစ်ဘူးသော လာနီညာဖြစ်စဉ်များနဲ့ ကွဲပြားစွာ ဖြစ်နေခြင်းပါ။
ဒါကတော့ လေပွေလှိုင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်မှု အရေအတွက် ပိုလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် မြန်မာအပါအဝင် အာရှတိုက်မှာ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေ တိုးလာစေပါတယ်။
အခုတပါတ်က ဖြစ်လာမယ့် လေပွေလှိုင်း သိပ်မထင်ရှားတဲ့ အပြင် အီကွေတာအနီး (မြောက်လတ္တီကျု့ 5-10 ဒီဂရီအတွင်း) လောက်သာ ဖြတ်သွားနိုင်လို့ မြန်မာနိုင်အပေါ် သိပ်မသက်ရောက်နိုင်ပါ။ သူဖြတ်သန့်းရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ ၂၇ ရက်အတွင်း မွန်ပြည်နယ်နဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းတွေ ကွက်ကျားမိုးအနည်းငယ်မှ အသင့်အတင့်ရွာနိုင်ပါတယ်။
ကျန်ဒေသတွေမှာ ဒီတပါတ်အတွင်း မိုးကင်းပြီး ညအပူချိန်သာ ဆက်လက်လျော့ကျ အေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကချင်စစ်ကိုင်းအထက် ချင်းပြည်နယ် ရှမ်းမြောက်နဲ့ ကယားပြည်တွေက ဆက်လက်အေးနေဆဲ ဖြစ်နေပါမယ်။ ပဲခူး မကွေး ရှမ်းတောင် ရခိုင်ရိုးမ တွေမှာ မြူထူဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်တပါတ် မှာ ထပ်မံတင်ပြပါမယ်။
မြဝတီမြို့ ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံး နှင့် အကောက်ခွန်ရုံး အနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား
ဘုရားရဲ့ တန်းခိုးတော်ကြောင့် ရေဘယ်လောက် ကြီးကြီး ဘုရားကျောင်းတော် ကို ရေမမြှုတ်တဲ့ ကျိုက္ခမီရေလည်ဘုရား
ကိုဗဈ အမွနျစဈကိရိယာတှေ သုံးရငျ ဖွဈပျေါလာမယျ့ အကြိုးဆကျ နှငျ့ မဖွဈမနေ ပွောငျးရမယျ့ မူဝါဒမြား..